वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि, श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए! – Online National Network
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि, श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए!
३० आश्विन २०७८, शनिबार ११:१०
एक युवा, जस्को ठुलो घर थियो, हाँसी खुसी परिवार थियो, सुख, सुविधा सबै थियो, परिपक्क उमेर भएकाले चारै तिर बाट बिहेको लागि कुरा आउँछ, कुल घरानकी एक असल केटिसँग विबाह पनि हुन्छ, तर उ प्राय उदास रहिरहन्थ्यो, दिल खोलेर हाँस्ने रमाईलो गर्ने गर्दैनथ्यो, किनकि बाहिर बाट जे देखिन्थ्यो त्यो पूरा साँचो थिएन।
घरमा भने बैंकमा पैसा जम्मा गरेको छु, आएपछी केहि गर्नुपर्छ भनेर ढाँट्नेगर्थ्यो। जब ऋण तिरेर भ्याउँछ अनि घर फर्कन्छ। एकदिन अचानक छोरो सिँढी बाट ल,ड्न पुग्छ , हतार हतार एम्बुलेन्समा हस्पिटल लैजान्छन, डाक्टरले निक्कै पैसा लाग्ने कुरा बताएपछी उसको सात्तो जान्छ, आजसम्म न उ सँग बैंकमा पैसा छ न त कुनै कुरा बेचेर पैसा आउने कुरा नै छ।
जब बैंक पुग्छ उ छक्क पर्छ। श्रीमतिले एटिएम बाट पैसा निकाल्छिन। उ हेरेको हेरै हुन्छ, हस्पिटल पुगेर पैसा बुझाउछिन, सबै जना चिन्तित भइरहेको अवस्थामा एकैछिन पछि भित्रबाट डाक्टर आउँछन् । अनि बाबुमा निक्कै सुधार भएको र कुनै पनि ख,तरा नभएको कुरा सुनिसकेपछि सबै खुसी हुन्छन ।
अनि यो गहना न,क्काली हो भन्ने पनि थाहा छ मलाई, हजुरलाई मैले नभनेको मात्रै हो , मेरो लागि सुन बहुमुल्य होइन , जुन दिन हामी एक भएका थियौं, अग्नि अनि हाम्रा सबै आफ्ना हरुलाई साक्षी राखेर हरेक सुख दुखमा साथ दिने भनेर क,सम खाएका थियौं । त्यो दिन हजुर बाट पाएको यो उपहार चाहे जे सुकैले बनेको होस् । मेरो लागि हिरा मोति भन्दा कम छैन ।”
उ केही बोल्न सक्दैन, एक टक लाएर श्रीमतिलाई हेरेर आँशु बगाईरहन्छ । श्रीमतीले आमाले झैं उस्लाई अँगालोमा बेर्छिन। आज सम्मको उसको पीडा सबै एकैपलमा हराएको महसुस गर्छ।
एक दुई दिनमा बाबुलाई पनि ठिक हुन्छ अनि अब चाहे जे होस, सुख दुख सबै मिलेर संगै सहने, जे छ त्यसमै रमाउने बिचार लिएर अब कैले पनि नछुट्टिने, कैले बिदेश नजाने अठोट लिन्छन र खुसी साथ जीवन बिताउँछन।